Nagu saabsan | Shenzhen Speedy Technology Co., Ltd.
Waxaa la aasaasay 2003, our warshad ku takhasusay soo saarid ee qaboojiyeyaal kala duwan FANS Waqtiga shaqaalaynta in ka badan 200 shaqaalaha, xarumaheena aqoon isweydaarsiga waxay daboolayaan aag 8000 mitir murabac ah oo leh awood wax soo saar sanadle ah oo ku saabsan 6,000KPCS. Waxaa naga go'an inaan horumarinno, soo saarno oo aan iibino waxqabad sare, tayo la isku halleyn karo iyo badeecado qiimo ku tartamaya dhammaan macaamiisheenna.
Lahaanshaha sumadda "Speedy" iyo "Coolerwinner", Taageerayaasha Speedy waxaa si ballaaran loogu isticmaalay aagga hawo bixinta iyo kuleylka, sida aagga IT, qalabka isboortiga, nidaamka hawo bixinta, mashiinnada alxanka, qalabka korontada, qalabka caafimaadka iyo korontada, qalabka mashiinnada iyo wixii la mid ah .
Speedy wuxuu leeyahay koox xoogan oo R & D ah, waxaan si buuxda u qalabeynay qalab kala duwan oo tijaabo xirfadeed iyo qalab cabbiraad ah, sida Tunnel Tunnel, Auto Balancer, Bileter Tester Tester, Noise Tester, Short Spray Testing, Inter leexashada tijaabada wareegga gaaban, baaritaanka gariirka, Sare- Tijaabinta heerkulka hooseeya iyo wixii la mid ah. Waxaan si guul leh kor ugu qaadnay nafteena si aan u qancino baahida suuqa ugu muhiimsan. Waxyaabahayagu waxay ka gudbeen shahaadada amniga caalamiga ah ee dalal iyo gobollo kala duwan sida: UL, CUL, TUV, CE, CCC, IP55, ROHS ， iwm.
Si loo daboolo baahiyaha horumarinta alaabooyinka cusub, loo siiyo alaab tayo wanaagsan oo xasilloon dhammaan macaamiisha, waxaan aasaasnay ​​"Waaxda Wax Isku Beddelidda" oo lagu leeyahay 8 mashiinnada wax lagu duro ee wax lagu duro, 1 EDM iyo mashiinnada kale ee CNC ee loogu talagalay wax soo saarka. Adeeg gaar ah ayaa la bixin karaa.
Xakamaynta tayada iyo horumarinta wax soo saarku waa aasaaska moodeelka ganacsi ee Speedy. Speedy had iyo jeer waxay dhageysataa macaamiisheeda horumar joogto ah, hal-abuurnimo, iyo soo saarid alaab cusub. Waxaan marwalba diyaar u nahay inaan siino xalka ugu fiican ee qaboojinta dhamaan macaamiisha. Waxaan rajeyneynaa in waxqabadka sare, waqtiga hogaaminta gaaban, adeegga tayada leh, tayada la isku halleyn karo iyo badeecada qiimaha tartanku ay ku qancin doonaan baahiyahaaga.
Si kal iyo laab ah u soo dhawow dhammaantiin inaad soo booqataan shirkadeena si aad u fahamtaan.
12cm Ac Axial Fan, Ilaalada Fan Birta, 172mm Ac Axial Fan, Hvac Fan Puller, Ilaalada Fan caaga, Taageerada Birta solay 80mm,